२२ फाल्गुन २०७५ बुधबार
काठमाडौँ उपत्यका आसपास थुप्रै हरिया डाँडाकाँडा छन् । तिनमा ग्रामीण पर्यटनका साथै साहसिक एवं सौन्दर्य पर्यटन फस्टाउँदो छ । यसैको एक उदाहरण बनेको छ, प्याराग्लाइडिङ ।
डोरीको सहायतामा एक प्रकारको पखेटा जोडिएको ग्लाइडरमा बसेर खेलिने साहसिक खेल हो, प्याराग्लाइडिङ । उडान भर्न २ हजार मिटरमाथिका उपयुक्त डाँडा बढी रुचाइन्छन् । डाँडामाथिको आकाशे खेल भएकाले खासगरी सुन्दर प्रकृति र ग्रामीण पर्यटनमा यो केन्द्रित छ ।
अहिले काठमाडौँ केन्द्रित साहसिक खेलप्रेमीको रोजाइमा छ- काठमाडौँ प्याराग्लाइडिङ । गोदावरी क्षेत्रको चापाखर्क (२,१०० मिटर) बाट उडान भर्ने र गोदावरीकै बोटानिकल गार्डेनसँगै जोडिएको रचनाटार (१,५०० मिटर) मा अवतरण गरिन्छ । आकाशमा कावा खाँदै जमिन टेक्न मौसमको अनुकूलता हेरी २० देखि ३० मिनेटसम्म लाग्छ । ८ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेपछि साहसिक खेलप्रेमीले प्याराग्लाइडिङको अद्भुत अनुभव लिन सक्छन् ।
हावामा तैरिएर रमाउँदै खेल्न सकिने यो खेल अचेल युवा रोजाइमा पर्ने गरेको छ । एउटा प्याराग्लाइडिङमा एक पाइलट र यात्रु बस्न मिल्छ । उडान भर्दा र झर्दाका हरेक प्राविधिक टिप्स पाइलटले ब्रिफिङ गर्छन् । आकाशमा उडिरहँदाका हरेक रोमाञ्चक क्षण फोटो/भिडियोमा कैद हुन्छ । त्यो तपाईंको जीवनको अद्भुत अनुभवका रुपमा संगृहीत हुन्छ । यसका लागि यात्रुले कुनै झन्झट बेहोर्नुपर्दैन । कम्पनीले नै आवश्यक फोटो र भिडियो उपलब्ध गराउँछ ।
यहाँ वाषिर्क करिब ९ महिना प्याराग्लाइडिङ गर्न सकिन्छ । त्यसमध्ये अक्टोबर र नोभेम्बर उपयुक्त समय हो । पहिले विदेशीको रोजाइमा मात्रै पर्ने प्याराग्लाइडिङ नेपालमा भने पोखराबाट सुरु गरिएको थियो । त्यसबेला बेलायती पाइलट एडम हिल र नेपाली पर्यटन व्यवसायी बिरु बमजनको सक्रियतामा दुई दशकअघि पोखरा भित्र्याइएको थियो, यो खेल । प्याराग्लाइडिङका प्रथम नेपाली पाइलट भने राजेश बमजन थिए । अहिले विश्वमै पोखरा प्याराग्लाइडिङ खेलका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बनिरहेको छ । प्याराग्लाइडिङमा रुचि राख्ने खेलप्रेमी त्यसैका लागि विभिन्न देशबाट नेपाल आउने गर्छन् ।
नेपालका प्रमुख केही हिमाली र पहाडी जिल्लामा प्याराग्लाइडिङ विस्तार हुँदै छ । अहिले यो साहसी खेल पोखरा र काठमाडौँका अतिरिक्त धरान भेडेटार, पाल्पा, पर्वत, बन्दीपुर, सुर्खेतलगायतका स्थानमा सञ्चालनमा छ ।
प्याराग्लाइडिङ मनोरञ्जनको साधन मात्रै नभई अर्थोपार्जनको वैकल्पिक माध्यम पनि हो । धेरै व्यवसायीको लगानी र रुचि पनि यसमा बढेको छ । त्यसले गर्दा आवश्यक जनशक्ति पनि नेपालमै उपलब्ध हुन थालेको प्याराग्लाइडिङविज्ञ पाइलट विजय चापागाईं बताउाछन् । भन्छन्, "के तपाईं साँच्चै साहसी हुनुहुन्छ ? साहसको परीक्षणका लागि प्याग्लाइडिङ गर्न सक्नुहुन्छ ।"
लेखक पाउलो कोएल्होले भनेका थिए- 'साहसी बन । जोखिम मोल । यहाँ अनुभवको कुनै विकल्प छैन ।' हो, साहसका अघि जे पनि सम्भव छ ।
कति नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा छन् ? इन्फोग्राफिक हेर्नुहोस्...
वैदेशिक रोजगारीमा कति नेपाली छन् ? देशअनुसार #Infographic
कोरोना संक्रमणको सन्त्रास त छँदैछ, उपभोक्तालाई भान्साको चिन्ता पनि छ । दैनिक उपभोग्य सामग्...
लकडाउनको अवस्थामा के गर्न हुन्छ ? के गर्न हुँदैन ? डा. समीरमणि दीक्षितको भिडियोः...
भारतबाट आउने नेपाली र विदेशीमध्ये कोही संक्रमित रहेछन् भने हामीले विमानस्थल बन्दसहित कोरोन...
भारतसँगको सीमानाका तत्काल बन्द नगरे कोरोना रोकथामका अरु पहल काम लाग्दैनन् #Video
#NepalMag साताका ७ तस्बिरमा कोरोना रोकथामको पूर्वाभ्यासदेखि राजधानीबाट बाहिरिँदै गरेका यात...